Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo La Wareegtay Magaalo Muhiim Ah. – Bogga Calamada.com
Guud ahaan Soddon Iyo Afarta Gobal ee uu ka koobanyahay dalka Afghanistan waxaa si dar dar leh kaga socda weerarada culus ee qeybta ka ah howlgalka Al-khandaq oo ah Xamlo dagaaleedka xilliga Gu’ga taasi oo maalmo ka hor ay ku dhawaaqday Imaarada Islamaiga Afghanistan.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada ayaa weerar culus oo qeyb ka ah Xamlada Al-khandaq ku qaaday magaalada Istiraatiijiga ah ee Kohistan oo ka tirsan Wilaayada Badkhasan ee Waqooy Bari dalka Afghanistan.
Dagaal culus oo gudaha iyo duleedka magaalada ku dhexmaray ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan iyo maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Kaabul ugu dambeyn ciidamada Mujaahidiinta waxey si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta magaalada Kohistan.
Tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka Ashraf Gani ayaa lagu dilay dagaalka tiro kalane waa lagu dhaawacay,iyadoona inta soo hartay ay cagahooda ku baxsadeen.
Xamlo Dagaaleedka Al-khandaq oo hadda socda wax aan ka badneen Labo Isbuuc ayaa maalmaha uu scda waxey ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan Fuliyeen weeraro isugu jira dagaal toos ah,qaraxyo,dilal qorsheysan iyo Camaliyaat Istish-haadiyo ah kuwaasi oo khasaara culus lagu gaarsiiyay ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa maamulka Ridada Kaabul.